Global Voices teny Malagasy » Fandinihana Momba Ny Herintaonan’ny Fanjavonan’ireo Mpianatra Tao Ayotzinapa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2015 8:39 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (en) i Samuel Francis, Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Diabe manohitra ny fitazonana sy ny fanjavonan'ireo mpampianatra 43 ao Ayotzinapa, ao Montevideo, Orogoay, 17 Novambra 2014. Sary avy amin'i Sofia tao amin'ny Flickr. CC BY-NC-ND 2.0.
Nandefa hafatra tao amin'ny Youtube andro vitsivitsy talohan'ny tsingerintaonan'ny fanjavonan'ireo mpianatra tao Ayotzinapa i Omar Garcia, izay antsoina koa hoe “faha-44″ noho izy tafavoaka velona tamin'ny loza ny alin'ny 26 Septambra 2014, raha nanjavona (ary voalaza fa novonoina) ireo mpianatra avy ao amin'ny Kolejy Ambanivohitra Raul Isidro Burgos ao Ayotzinapa. Tao anatin'ny lahatsariny, nilaza lahatsoratra vao haingana nalefan'ny Vondrona Manampahaizana avy amin'ny taranja maro  izay nandà ny fanazavana ofisialy momba ny zava-nitranga io alina io izy ary nitady ny fanohanan'ny vahoaka mba tsy hohadinoina ireo olon-kafa an'arivony nanjavona.
Tsy voambolana fotsiny izy ireo, milaza koa ankehitriny ireo manam-pahaizana, afaka nandinika ny tatitry ny Fampanoavana ny fikambanana iraisam-pirenena ary nahita ny tsy fanarahan-dalàna rehetra (…) Ankehitriny dia afaka mampiseho isika fa fehezin'ny fanjaka-drongony i Meksika .
Tsy velona i Meksika, maty i ​​Meksika. Ahoana no ahafahantsika mankalaza ny fahaleovantena amin'ny 15 Septambra? Fahaleovantena avy amin'ny inona? (…)
Manantena aho fa afaka mamerina ny hetsika manerantany 26 Septambra ianao(…) Voaporofo indray fa ara-dalàna ny hetsika. Nihevitra izy ireo handresy antsika ny andro sy ny volana. Nihevitra izy ireo afaka volana maromaro, hijanona hangina ny ray aman-drenin'izy ireo fa te hody an-trano fotsiny, saingy tsy izany no nitranga. (…)
Ho anay, tsy tapitra ny alin'ny 26 Septambra.
Araka ny voalazan'i Omar, mikarakara hetsika iraisampirenena ireo mpikatroka, izay mitovy ny tamin'ny 15 Novambra 2015 , raha nivondrona ny olona an'arivony ny amin'izay “mety ho hetsika ara-politika goavana indrindra eo amin'ny tantaran'i Meksika.” Anisan'ireo hetsika hafa karakaraina amin'ny 26 Septambra ny diabem-pirenena , diabe kasaina hiainga avy ao Los Pinos (trano fonenana ofisialin'ny Filoha) mankao Zocalo (kianja lehibe) ao an-drenivohitra. Mihetsiketsika ny olom-pirenena marobe mba handray anjara amin'ny hetsika manerana ny firenena.
Ahitana hetsika ara-kolontsaina ihany koa ny fahatsiarovana ny zava-nitranga, toy ny sary mampiseho ny tantaran'ireo mpampianatra tsy hita, izay mitondra ny lohateny hoe “365 por los 43. Hasta las paredes saben”  (“365 ho an'ny 43. Mandra-pahafantaran'ny rindrina”), notontosaina nanomboka tamin'ny 19 Septambra ka hatramin'ny 17 Oktobra ao amin'ny Casa do do hijo Ahuizote, ao amin'ny renivohi-pirenena. Omen'ireo mpakasary alalana hampiasa ny sary ny vahoaka mba hozarain'izy ireo eny an-dalana ary avoaka eny amin'ny rindrina ho toy ny endrika fanehoan-kevi-bahoaka. Napetraka ihany koa ny karazana sarety mba hizarana ny sary nandritra ny diabe 26 Septambra tao Mexico City.
Sarin'ny fihetsiketsehana, avy amin'i Valentino Bellini: “365 ho an'ny 43. Mandrapaha-fantaran'ny rindrina.”
Eo ampandinihana ny dikan'i Ayotzinapa, nosoratan'ilay mpanao gazety sady mpanoratra Federico Mastrogiovanni , ampiarahany amin'ny fampiratiana an-tsary, ireto songa tamin'ny lahatsoratra :
Dimy amby fito-polo sy telon-jato andro no manasaraka antsika amin'ireo mpampianatra telo amby efa-polo ao Ayotzinapa.
Tamin'ny 26 Septambra, 2014, nijanona ny maha-toerana azy i Ayotzinapa, ary lasa hevitra, sariohatra. (…)
Nandritra ny dimy amby fito-polo sy telon-jato andro, nampitoviana amin'ny fanjavonana noterena ny 26 Septambra. (…)
Tao anatin'ny herintaona, nandrakitra an-tantara ny fitadiavana ny ny fahamarinana sy ny fanaintainana, ny diabe sy ny fanantenana ary ny hatezerana ireo mpaka sary Valentino Bellini, Brett Gundlock, Giulia Iacolutti, Mauricio Palos, ary Heriberto no Paredes
Saingy tsy tanteraka ny asan'izy ireo raha tsy miteraka fahatsiarovan-tena, raha tsy mameno ny toeram-bahoaka, raha tsy mamahana saina. (…)
Koa tsy hanjaka intsony anie ny fanadinoana sy ny tsimatimanota.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/29/75074/
 Kolejy Ambanivohitra Raul Isidro Burgos : https://en.wikipedia.org/wiki/Ayotzinapa_Rural_Teachers%27_College
 Vondrona Manampahaizana avy amin'ny taranja maro: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2015/008.asp
 fanazavana ofisialy : https://globalvoices.org/2014/11/09/outrage-as-mexicos-attorney-general-says-missing-ayotzinapa-students-are-dead/
 15 Novambra 2015: https://globalvoices.org/2014/11/06/protesters-descend-on-mexico-city-to-demand-action-for-missing-ayotzinapa-students/